Hordhaca Leganes v Real Madrid wareega 16-aad ee LaLiga Spain – Walaal24 Newss
February 21, 2018	Off	By walaal24
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ka hor kulanka Los Blancos ee Primera Division ee ka dhacaya Butarque caawa Arbacada ah, Real Madrid ayaa indhaha ku heysa inay ka dhisto kooxda ay xafiiltamaan ee La Liga marka ay la cayaaridoonan Leganes caawa oo Arbacada ah na kulankii horey u baaqday
Tababaraha kooxda Zinedine Zidane ayaa cadaadis kala kulmay xilli ciyaareedkii hore kooxda heysata horyaalnimada xilli ciyaareedkan ee kaalinta 4aad, iyadoo 17 dhibcood ka danbeysa hogaamiyaasha Barcelona.
Laakiin Real ayaa aruursatay qaab ciyaareedkooda isbuucyadii u danbeysay, iyagoo garaacday Real Sociedad iyo Real Betis kuwaasoo ka horyimid labada kooxood ee guusha ka gaartay Paris Saint-Germain, islamarkaana dhaliyay 13 gool tartankan.
Waxay haatan leeyihiin fursad ah inay xiraan farqiga u dhexeeya Barcelona marka ay ciyaarayaan kulan ay ku ciyaari karaan 13ka xul ee Leganes.
“Waxaan si fiican u ciyaareynaa daqiiqad,” ayuu yiri Zidane. “Waxaan muujineynaa waxa aan sameyn karno, waxaana dooneynaa inaan sii wadno wanaaga wanaagsan, waana waxa aan isku deyneyno inaan isbuuc walba isku diyaarino.
Leganes ayaa ku jirta kaalinta 13aad ee horyaalka La Liga, 11 dhibcood oo nadiif ah ayaa ka hooseysa kooxda heerka labaad ee Real Madrid Arbacada.
Ka dib markii ay soo baxeen Los Blancos, kooxda ka dhisan caasimada Spain waxay ku dhameysatay finalkii Copa del Rey dhamaadkii ciyaartii semi-finalka ee Sevilla, tan iyo markii laga badiyay labadii kulan ee ugu danbeysay ee Primera Division: 1-0 ayay ku kala baxeen Eibar iyo 3-0. ee Girona.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara Alexander Szymanowski ayaa dhaawacan, halka ciyaaryahanka dhexe ee khadka dhexe Darko Brasanac uu shaki ku jiro.
Inkastoo ay garaaceen Real Madrid kulankii Copa del Rey, Leganes ayaa laga badiyay labadii kulan ee ugu dambeysay ee ay la ciyaartay Los Blancos.
Real Madrid ayaa ku guuldareysatay inay shabaqa ilaashato hal kulan oo ka mid ah sideedii kulan ee ugu dambeysay La Liga, waana tan ugu xun tan iyo bishii August 2013.
Real ayaa aheyd kooxdii ugu horeysay taariikhda horyaalka La Liga si ay u gaarto 6,000 gool tartamada oo dhan.
Qarax ka dhacay saldhig booliis oo ku yaalla magaalada Copenhagen ee dalka Denmark